Golaha wasiirada Puntland oo dood ka yeeshay geedi-socodka hannaanka dimuqraadiyadeed ee Puntland. – Radio Daljir
Golaha wasiirada Puntland oo dood ka yeeshay geedi-socodka hannaanka dimuqraadiyadeed ee Puntland.
Garowe, Oct 31 ? kullankii caadiga ahaa ee golaha wasiirada Puntland yeelan jireen isniin-kasta ayaa maantay waxaa si wayn looga dooday geedi-socodka hannaanka dimuqraadiyadda ee Puntland.
W/kuxiggeenka 2-aad ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hiddaha iyo dhaqanka dawladda Puntland C/llaahi Maxamed Faarax ?Asad? ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir waxaa uu ku sheegay in golaha wasiiradu ay si qeexan uga hadleen xeerarka doorashada dalka, iyo hirgalinta asxaab siyaasadeed oo talada dalka u tartama.
C/llaahi Maxamed Faarax ?Asad? ayaa sheegay in xeerkaan golaha xukuumaddu ay ka doodeen la horgayn doono, golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda. Si haddii ay isku raacaan loogu gudbiyo madaxwaynaha dawladda Puntland, dabadeedna uu u ansixiyo.
Dhinaca kale, W/kuxiggeenka 2-aad ee warfaafinta Puntland mudane Aswad ayaa sheegay in sidoo kale golaha wasiiradu ay maantay ansixiyeen xeer ku saabsan joojinta gudniinka furcooniga ah ee gobollada Puntland, kaasoo ay golaha xukuumadda hor-keeneen wasaaraddaha haweenka iyo caddaaladda Puntland.
Inta badan kullamada ay isniin kasta yeeshaan golaha xukuumadda dawladda Puntland ayaa looga hadli jiray arrimo la xiriira nabad-galyada Puntland, balse kulankii maantay ay goluhu yeeshaan ayaan ammaanka looga hadlin.